युगसम्बाद साप्ताहिक - मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
Tuesday, 01.28.2020, 10:24am (GMT+5.5) Home Contact
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
Tuesday, 12.01.2015, 02:56pm (GMT+5.5)
यतिबेला मधेश प्रदेशको आन्दोल मच्चिएको छ । यो आन्दोलनको भित्री रहस्य मधेशी जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशका लागि भैरहेको आन्दोलनमा भारतले दिएको चासो कोश, कर्णाली, महाकाली जस्ता सदावहार नदीहरूमाथि कब्जा जमाउनु नै हो । भारत नेपालको मधेशलाई जलभण्डार बनाएर आफ्नो भूमि हराभरा पार्न चाहन्छ । किनभने भारतको जनसंख्यालाई चाहिने पानी र खाद्यान्नको पूर्ति नेपालका नदीनालाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले नेपालमा भएको जलस्रोतको एकलौटी दोहोन गर्ने आकांक्षा राखेको भारतले त्यसैका लागि मधेश आन्दोलनलाई साथ दिइरहेको छ । भारतको यो चालवाजी यतिबेला मात्र हैन, उतिबेलैदेखि चलिरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा सडकको नाममा बाँध बाधेर पानी जम्मा पर्ने भारतले नेपालमा नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला भारत बाँकेमा सडकको नाममा बाँध बाधिरहेको छ । (पृष्ठ तीन पनि हेर्नुहोस्)
दशकौंदेखि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रमा सडकको नाममा बाँध निर्माण गर्दैआएको छ । भारतले यसअघि बाँकेको लक्ष्मणपुर, कपिलवस्तुको महलीसागर र रुपन्देहीको रसियावाल–खुर्दलोटन बाँध निर्माण गरेर बाढीका समयमा आफ्नो भूभाग सुरक्षित गर्ने, नेपालतर्फ पानी जम्मा गरी सुख्खायाममा सिंचाई सुविधा मिलाउने र सीमाक्षेत्रमा खटाइएका अर्धसैनिक सुरक्षा बलका लागि नेपालतर्फको निगरानी गर्ने उद्देश्यले सो संरचना निर्माण गरेको हो ।
सीमाक्षेत्रमा निर्माणाधीन सो बाँधका कारण वर्षातका समयमा नेपालका हजारौं विघा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा पर्ने नेपालका विभिन्न भूभागहरू अतिक्रमण गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रनजिक दुवैतर्फ ८ किलोमिटरसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भए तापनि भारतले त्यो कानुन र सन्धिको ठाडै उल्लंघन गर्दै आएको छ । नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी दर्जनौं ठूला संरचना र बाँधहरू निर्माण गर्दै आएको छ । भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा जनस्तरबाट व्यापकरुपमा दवाव र आक्रोशहरू प्रकट भए पनि नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तहबाट कुनै किसिमको उल्लेखनीय प्रयत्न हुन सकेको छैन । सत्तामा नरहँदा राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने र सत्तामा गएपछि नउठाउने गर्नाले पनि भारतलाई अतिक्रमण गर्न उर्जा मिलिरहेको छ ।
भारतको उच्च चासो रहेको मधेश प्रदेशमा थप्नुपर्ने जिल्लाहरूको नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो महत्व छ भने ती जिल्ला भारतको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पनि महत्वपूर्ण छन् । जेजस्तो सुझाव ग्रहण नगरेको भनेर भारतले अहिले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ त्यसभित्र मधेशी जनताको हित हैन भारतकै मात्र हित हेरिएको छ । सोझा मधेशी जनताले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । आन्दोलन अधिकार स्थापनाका लागि भए पनि अब त्यो भारतको स्वार्थपूर्तिको हतियारका रुपमा स्थापत हुने खतरा मडारिएको छ ।
मोरङ र सुनसरी मधेशमा हाल्नुपर्ने माग अरु केही नभएर कोशी नदीमाथिको अधिकार स्थापित गराउन हो । त्यस्तै कैलाली र कञ्चनपुर महाकाली र कर्णाली नदीमाथिको अधिकार जमाउन हो । यसका लागि भारतले लामो समयदेखि योजना बनाइरहेको छ । भारतले नेपालमा अहिलेसम्म गरेका जलसम्झौताहरू किन अघि बढेका छैनन् ? महाकाली सन्धिको हालत के भयो ? स्याटलाइनबाट बिजुली बेच्ने सपना देखाउनेहरू अहिले पनि सत्तामै छन् । उनीहरू यस विषयमा किन केही बोल्दैनन् ? पञ्चेश्वर परियोजना किन अघि बढेन, गण्डक सम्झौताको कार्यान्वयन किन भएन ? कोशी बाँध पीडितहरूको मुआब्जा किन अहिलेसम्म पाएनन् । यी यावत प्रश्नहरूको खोजी गर्ने हो भने मधेश आन्दोलनको बलमा भारतले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मेरुदण्डमै प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । यो अहिलेको मात्र हैन दशौंदेखिको प्रयास हो ।
प्रश्न के हो भने मधेशवादीका के के माग पूरा भए र के के पूरा भएनन् ? त्यसको जानकार कोही पनि छैन । अधिकार नपाएको भनेर सडकमा उत्रेका जनतालाई तिमीले यो यो पायौं, अब यो यो विस्तारै पाइनेछ भनेर भन्नसक्ने नैतिक साहस सत्तापक्ष र संविधान पक्षधरले देखाउन सकेका छैनन् । न कूटनीतिक तवरमा आन्दोलन र नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्न सकिएको छ न त राजनीतिक रुपमै । यस्तो अवस्थामा नेपाल विखण्डनको दिशातिर धकेलिंदै गएको र अन्ततः भारतको चाहना त्यही नै भएकाले यस्तो गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना हुनुपूर्व सबै सचेत हुनुको विकल्प छैन ।